Morata oo, taariikh ahaan, noqonaya laacibka ugu qaalisan ciyaartoyda Spanish-ka. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Morata oo, taariikh ahaan, noqonaya laacibka ugu qaalisan ciyaartoyda Spanish-ka.
Morata oo, taariikh ahaan, noqonaya laacibka ugu qaalisan ciyaartoyda Spanish-ka.
Posted by: radio himilo July 20, 2017
Chelsea ayaa 80 Million oo lacagta Yurub ah kula wareegtay ciyaaryahanka Spain u dhashay ee Alvaro Morata kaas oo ka yimid Real Madrid, wuxuuna laacibkan sidaas ku noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan ciyaartoyda Spain Taariikhda.
Fernando Torres ayaa sanadkii 2011-kii ku biiray Chelsea isaga oo ka yimid Liverpool markaas oo loo caleemo saaray xiddiga ugu qaalisan ciyaartoyda Spain isaga oo lacag dhan 50 milyan ku yimid Blues.
Gaizka Mendieta oo ka tagay Valencia una dhaqaaqay Lazio sanadkii 2001 ayaa ah ciyaaryahanka 3aad ee ugu qaalisan laacibiinta Spain ee koox ay la wareegatay – 48 million oo Euro ayuuna ugu dhaqaaqay kooxda Talyaaniga.
Heshiiskii ugu weynaa ee labo koox oo Spain ah dhex mara ayaa ahaa kii u dhaxeeyey kooxaha Valencia iyo Barcelona markii uu David Villa ka soo tagay Valencia kuna biiray kooxda Barcelona lacag gaaraysa 40 million Euro. Wuxuuna sidaas ku noqonayaa ciyaaryahanka 4aad ee ugu qaalisan Ciyaartoyda Spain, waxaana ka horreeya Alvaro Morata, Fernando Torres iyo Gaizka Mendieta.
Waxaa qoray: Abdiaziz Adan Urur.
Previous: David Villa oo wajahaya kooxdii uu loolanka kala dhaxeeyay ee Real.
Next: Kadib qiimaha Morata, maxaa iska badalay liiska laacibiinta ugu qaalisan dunida?